Chelsea oo Guul weyn ku Daah furatay horyaalka Premier League xili uu Shabaqa gaaray Saxiixa cusub ee Jorginho+SAWIRRO – Gool FM
CR Shariif August 11, 2018
( Premier League ) 11 Agoosto 2018. Chelsea ayaa si raaxo ah ku dhaaftay kooxda Huddersfield Town oo ay u martigeen kulankooda daah durka horyaalka, iyadoo uga badiyay 3-0.
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala nastay 2-0 oo ay ku hogaamineysay kooxda Cheslea, waxaana goolka daah furka dhaliyay laacibka koobka adduunka ku guuleystay ee N’golo Kante markii uu diib usoo dhigay Willian uu shabaqa ku hubsaday.
Naadiga Huddersfield Town ayaa ku dhawaatay inay barbareeyaan goolka lagu hogaaminayo markii mid kamida cayaartoydeeda uu kubbad ku garaacay birta taa oo aheyd gees labaad.
Daqiiqadii ugu dambeeysay qeybta koowad Blues ayaa dheereysatay hogaanka waxaana goolka u gaaray saxiixooda cusub ee Jorginho oo dhaliyay rigoore qaladkeeda lagu galay ninka dambeedka bidix ee Marcos Alonso,
Dib markii laagu soo laabtay kaambiyaha dambe labada dhinac ayaa sii watay bandhig cayaareedkooda.
Kooxda Chelsea ayaa heshay laba fursadood oo ay ku dheereysan kartay hogaanka balse uma aysan suura galin isku daygii ay goolka ku bartilmaameedsadeen xiddigaha Rudiger iyo Alonso oo birta garaacay.
Huddersfield ayaa dhawr halis galisay goolka Chelsea laakiin daafaca adag ayaa mar walba ahaa mid ka hortagayay qatarta martigaliyaasha ka imaaneysa.
Daqiiqadii 79-aad Chelsea ayaa la timid goolka seddaxaad oo ahaa kubbad weerar celisa waxaana dhaliyay laacibka Pedro oo caawin cajiiba ka helay Edan Hazard oo badal ku soo galay dheesha.
Ugu dambeyn kooxda galbeedka London ka socotay ee Chelsea ayay guusha cayaarta ku raacday 3-0, waxayna sidaan ku qabteen hogaanka horyaalka.
Daawo Sawirrada Cayaarta
Ramón Calderón oo ka hadlay kan wanaagsan labada xidig ee kooxda PSG Mbappé iyo Neymar